Nepalistudioएउटा विद्यार्थी शिक्षक वा नेता बन्ने सपना किन देख्दैन ? - Nepalistudio
एउटा विद्यार्थी शिक्षक वा नेता बन्ने सपना किन देख्दैन ?
‘मबाट के गल्ती भयो महाराज ?’ शिक्षकले चित्रगुप्तसँग प्रश्न राखेछन्।
‘हेर, यो नेपालमा जतिपनि शिक्षक मरे प्रायः स्वर्गमै आउँछन्। नर्कमा कोही शिक्षक पनि जाँदैनन्। स्वर्गमा यति शिक्षक आइरहन्छन् कि तिनीहरु स्वागत गर्ने हो भने यहाँ अरु काम केही भ्याइँदैन। तर नेता यहाँ झुक्किएर मात्रै आइपुग्ने हुन्। धेरै उतै नर्कतिर जान्छन्। त्यसैले आएको बेलामा उनलाई प्रोत्साहन गरौं भनेर पुरस्कारस्वरुप स्वागत गरेको सन्देश दिनका यो व्यवस्थापन गरेको हो।’
प्रकाशित मिति :- २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार २३:५५